Emery oo loo magacaabay tababaraha cusub ee Arsenal - BBC News Somali
Emery oo loo magacaabay tababaraha cusub ee Arsenal
Emery ayaa noqonaya tababirihii labaad ee maamula Arsenal ee aan Britain u dhalan, Arsene Wenger ayaa ka sii horreeyay
Unai Emry ayaa la isku raacay inuu kooxda Arsenal hogaamiyo kaddib markii agaamisaha guud ee kooxdaasi, Ivan Gazidis, uu xaqiijiyay inuu Emery noqonayo tababaraha cusub ee kooxdaasi maamuli doona.
Emery, oo 46 jir ah, ayaa ku soo biiraya kooxda Gunners kaddib markii uu isaga tegay kooxda PSG ee waddanka Faransiiska taas oo uu u qaaday Horyaalka dalkaasi ee Ligue 1-ka.
Tababarahan u dhashay dalka Spain ayaa sidoo kale kooxdiisii hore u qaaday afar koob oo gudaha Faransiiska laga dheelo, halka kooxdii uu horay u maamuli jiray ee Sevilla uu u qaaday koobka Europa League.
Waxa uu badalayaa tababarihii hore ee Arsenal, Arsene Wenger, kaas oo isaga tegay kooxda kaddib markii uu maamulayay 22 xilli ciyaar.
Unai Emery tababaraha cusub ee Arsenel oo la sawiran tababarihii hore ee kooxdaasi Arsene Wenger
Kaaliyaha tababaraha kooxda Manchester City ahna kabtankii hore ee kooxda Gunners, Mikel Arteta, ayaa aad loogu badinayay inuu bedli doono Wenger, hasayeeshee Emery - oo aanan si wanaagsan ugu hadal af Ingiriisiga - ayaa waxaa soo xulay guddiga shaqaaleynta ee kooxda Arsenal.
Arsenal ayuu ku hogaamin doonaa marxaladda cusub ee taariikhdeeda kaddib markii uu kooxdaasi isaga tegay Wenger, oo 68 jir ah, kaas oo u qaaday saddex koob oo Horyaalka Ingiriiska ah iyo todoba koob oo FA ah.
’'32 sano ayey igu qaadatay inaan helo wiilkeyga afduubka iiga maqnaa’'!
Maxaabiis ka tirsanaa Taliban oo la ansixiyay in xabsiga laga siidaayo